Xubinta yabooha oo muddo ka badan la xafido kari doono - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xubinta yabooha oo muddo ka badan la xafido kari doono
La daabacay torsdag 14 september 2017 kl 13.00
Cusbitalka jaamicadda Skåne (Sus). sawir: Emil Langvad/TT
Bandhigii "Body worlds" iyo xubinta wadnaha bani'aadamka. sawir: ERIK MÃ
Waxaa dhowaantan suurta geli doona hab cusub ee wadnaha lagu bedelo. 12 saacadood ayaa suurtagal noqon doonta in xubinta yabooha ee wadnaha la xafido, halka ay iminka ka tahay 4 saacadood , sida lagu sheegay qoraal saxaafadeed laga soo saaray cusbitalka jaamicadda Skåne (Sus).
Toddobaadkii ina dhaafay ayaa markii ugu horreeysay wadnaha shakhsi loogu bedelay habkan cusub, middaasina oo macnaheedu tahay in xubinta wadnaha lagu xafido iyada oo lagu quudineyo mamshiin walxo muhiim u ah hawo siinta wadnaha.
-Arrinkaa ayuu macnihiisu yahay in laga soo qaadi karo wadnaha lagu yaboohey meel walba oo Yurub ku taala, sida uu sheegay caalinka Johan Nilsson, oo ka howl-gala jaamicadda Lund.
Nilsson ayaa qalliin wada-jir ula sameeyey saddex dhakhaatiir kale ee qalliin, halkaasina oo uu goob joog ku ahaa caalinkii helay nidaamkan cusub Stig Steen oo horay uga howl-geli jiray Cusbitalka Jaamicadda Skåne - Sus.
"Wadnaha ayaa markiiba hoowshiisii bilaabay, middaasina oo aan horay loo arki jirin", sida uu sheegay Johan Nilsson.
Cusbitalka jaamicadda ee Skåne ayaa lix qalliin oo tijaabo ah ogolaansho uga heeysata guddiga tijaabinta anshaha etikprövningsnämnden.